Aaway Xarunta Zigana Ski Center? Sida Loo Helo Sidee ayey qiimaha iyo fursadaha hoygu? | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Banaadir29 GumushaneAaway Xarunta Zigana Ski Center? Sida Loo Helo Sidee ayey qiimaha iyo fursadaha hoygu?
27 / 02 / 2020 29 Gumushane, GUUD, Gobolka Banaadir, TURKEY, TELPHER, VIDEOS
sida loo tago zigana dalxiis, sida loo helo qiimaha iyo hoyga
Xarunta Zigana Ski waxay ku taal xudduudda Tuulada Zigana ee degmada Torul, 40 km u jirta Gümüşhane iyo 3 km u jirta Zigana Pass. Meelaha loo dalxiis tago ee barafka ayaa ku yaal Gobolka Bari ee Badda Madoow ee Badda Madoow. Dhererka xarunta waa 661 mitir. Waxay leedahay awood ah 843 qof saacaddiiba.
Meelaha Zigana Ski Center Track Information Ski meelaha u dhexeeya 1.900 iyo 2.500 mitir. Ballaca wadiiqadu waxay u dhexeeysaa 100 iyo 200 mitir waxayna leedahay isugeyn 20 boqolkiiba ah. Qalabka iyo qalabka looga baahan yahay adeegga joogtada ah ee waddooyinka tareenka ayaa ku filan. Haddii aad markii ugu horeysay aad boon-boodo, waxaad caawimaad ka heli kartaa macallimiin khibrad leh. Waxaa ku jira 1 teleskis ah Zigana Ski Center. Waxa kale oo jira xarun kor u qaadista ilmaha ah.
Ma ku jiraan hoteel loogu talagalay ujeedooyinka guryeynta ee Xarunta Zigana Ski Center?
Waxaa ku yaal hoteel baraf ah oo lagu hoydo bartamaha barafka. Marka laga soo tago tan, guryaha Bulgalov waxay leeyihiin maqaayado. Makhaayadda waxay furan tahay sanadka oo dhan. Masaafada u dhaxaysa Gümüşhane iyo Trabzon, waad imaan kartaa Xarunta Ski waxaadna ku raaxeyn kartaa barafka.
Qiimaha Kirada ee Qalabka Ski ee Xarunta Zigana Ski (2020 Dhab ahaantii)
Xad gudub xad dhaaf ah (50 TL qofkiiba)
Kirada kooxda Ski (qofkiiba 50 TL)
Kirada barafka lagu ciyaaro (qofkiiba 50 TL)
Kiro Sled ah (qofkiiba 20 TL)
Dalxiiska mashiinka macaashka (150-300 TL qofkiiba) waa ku kala duwan yihiin booqashada.
Sidee loo tagaa Xarunta Zigana Ski Center?
Xarunta Zigana Ski waxay ku taalaa xudduudda Tuulada Zigana ee degmada Torul ee Gümüşhane. Gurigu wuxuu 40 KM u jiraa Gumushane. Waxaad si sahlan ugu tegi kartaa Zigana Ski Center adiga oo saaran gaarigaaga khaaska ah, bas ama diyaarad.
Hadaad rabto inaad la imaato gaarigaaga qaaska ah, waxaad gaari kartaa xarunta barafka kadib 60km dhanka bari ka dib markaad dhaaftid Zigana Pass, oo kuyaal 3,5 kiiloomitir wadada Gümüşhane-Trabzon.
Kuwa raaca basaska ku-meelgaarka ah ayaa imaan kara wakhti gaaban iyadoo uga mahadcelineysa basaska dalxiiska ee ka tagaya baska ka dib markay ka dagaan G Busmüşhane Bus Terminal.
Kuwa diyaaradda ku safri doona, waxaa jira adeeg xamuul oo laga soo qaado garoonka diyaaradaha illaa xarunta barafka, oo 60 kiiloomitir kadib kasoo degta garoonka diyaaradaha Trabzon. Sidan oo kale, waxaa suurtagal ah in lagu laabto garoonka diyaaradaha iyadoo lagu soo celinayo xamuulka.
Nambarka Xarunta Xiriirka ee Zigana Ski: 0 (456) 629 10 04
Sidee loo aadaa garoonka diyaaradaha ee Istanbul?
Guryo siinta Muratdagi Thermal Ski Resort
Shirkada Hotel Accommodation Deals
Halkee ka dhalan doona Xarunta TÜRASAŞ xarunta midowga saddexda shirkadood ee ku xiran TCDD?
Qiimaha mitrooga ayaa kordhay 50